Inona ny vidin'ny Konferansa malemy? | Martech Zone
Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho no niantso antso tamin'ny kaonferansa izay nandany fotoana be fotsiny. Na rindrambaiko glitchy, mpanolotra tsy voaomana, na loza am-peo, mandany fotoana sy loharano be izany. Ary azo antoka fa tsy manampy izany rehefa mahatsapa aho fa mihoatra ny 30 isan-jaton'ny fotoana izao.
Ny fivoriana rehetra - an-tserasera na an-trano - dia fampiasam-bola ataon'ny orinasanao amin'ny fotoana sy vola ary enti-miasa. Na izany famatsiam-bola izany nanjary tsara - rehefa mihoatra ny vidiny ny sandany - dia miankina amin'ny valin'ny fivoriana.
Fantatrao ve fa mandany vola ny orinasa kely 37 miliara dolara isan-taona amin'ny fivoriana tsy ilaina? Eritrereto mandritra ny iray minitra. Isaky ny mipetraka amin'ny fivoriana tsy mamokatra ianao dia very vola ara-bakiteny ny orinasanao. Ary mikasa ny hiloka aho fa maro amin'ireo fivoriana manatrika anao no hita fa tsy mamokatra. Amin'ny maha-tompona orinasa ahy, mahasosotra ahy izany.
Miaraka amin'ny habetsaky ny vola laniana amin'ny fivoriana tsy mamokatra isan-taona, dia mahagaga izany ka vitsy ny manandrana manamboatra ny olana. Manana torolàlana momba ny fomba tokony hitantanana fivoriana ve ianao? Misy tanjona ve ny fivoriana rehetra? Misy olona manao solontena sy manara-dia ve aorian'ny fivoriana? Raha toa ka namaly hoe "tsia" ianao amin'ireto fanontaniana ireto dia tonga ny fotoana hijerena ny fomba fitantanana ny fivoriana eo amin'ny orinasao.
Orinasa maro no tsy mahalala ny vola laniny amin'ny fivoriana tsy mamokatra isan-taona. Niara-niasa tamin'ny izahay teknolojia fiaraha-miasa mpanohana ReadyTalk hamolavola kajy fifampiresahana izay hampiseho aminao hoe ohatrinona no laninao ary inona ny kaonferansa malemy miandry anao. Ho an'ny zavatra tsara kokoa aza, zahao ny azy ireo fitahirizam-boky mahavariana.
Andramo Kajy fanaovana kaonferansa malemy an'ny ReadyTalk amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy etsy ambany, ary manomboka manamboatra ny fivorianareo izao!
Mampiasà Calculator malemy
Fampahafantarana: ReadyTalk dia mpanjifa an'ny DK New Media!
Tags: fihaonambe am-peofanaovana kajyantso ho an'ny fihaonambefihaonambe fivarotanareadytalkfihaonambe horonantsarysehatra webinar
Ahoana ny fomba hamoronana fitarihana B2B bebe kokoa miaraka amin'ny atiny
Fampiharana finday: Maninona no manangana, inona no hanangana, ny fomba hampiroboroboana azy